शारदा – मझेरी डट कम
असङ्ख्य युवती आमाहरू
मेरो अगाडि आउँछने
गोविन्द बहादुर मल्ल 'गोठाले'
कसनांचा ज्यापूको सातआठ वर्षको छोरो बिहानीपख झल्लयाँस्स ब्यूँझेछ । ठीक त्यसै बखतमा तल छिँडीबाट ‘कुखुरीकाँ’ शब्द सुनियो । विसनांचाले कान थापेर सुन्न थाल्यो, भड्भड पखेटाको चाल र फेरि ‘कुखुरीकाँ’ । उसको मुख आनन्द तथा खुसीले प्रफुल्लित देखिन थाल्यो । मिरमिरे उज्यालो हुन लाग्यो, टाढाटाढाबाट भाले एउटापछि अर्कोले चिच्च्याईचिच्च्याई दिनलाई डाकिरहेका थिए । विसनांचा मुग्ध भएर सुन्न लाग्यो । एकछिनपछि फेरि आफ्नो भालेले भड्भड् गर्दै ‘कुखुरीकाँ’ गर्यो । अब त्यसलाई बसिसक्नु भएन र जुरमुराउँदै उठेर बस्यो । उसलाई किन हो कुन्नि आफ्नो कुखुराले गाएको तान सारै मीठो लाग्यो, सारै मज्जा लाग्यो ।
कछुवाले अङ्गसरी खुम्च्याई बाह्य वृत्तिका तार ।
भित्र अलिकति हेर्दा अर्कै रसिलो चमत्कार ।।१।।
दुर्गम भै उर्लेकी तलतिर समतुल्य मोहकी गङ्गा ।
फरफर गर्छ उपर यो जीवनमय पातलो चङ्गा ।।२।।
चरी बोल्यो मेरो मन सब बुझी त्यो चिरिबिरी ।।१।।
अहो !! त्यस्ता ताता नजर अति राता विष सरी
तरी तात्यौ बाबा ! किन मनमनै त्यो रिस गरी ।
तिमी धर्मात्मा छौ घरबिच म छू आज अतिथि
तिथी माघे औंसी शहरभर भूकम्प-फजिती ।।२।।
छोटो किस्सा एउटा सानो झ्याल हो, जहाँबाट एउटा सानो संसारमा चियाइन्छ । ठूलोभन्दा सानो झन् ठूलो छ, अनन्त पनि संकेत र मूर्तिमा प्रतिविम्बित हुन्छ । आजकल लन्डनमा सेन्ट पालको सुई मुसाभन्दा छिटो दगुर्दछ, आधुनिक जीवनको संकीर्णताको सबब र समयको घोडदौडका कारण छोटो किस्सा टेबुलमाथिको आँपभन्दा मीठो सम्झिइन्छ । वास्तवमा छोटकरी रचना नै आजकल सच्चा साहित्य बनिरहेछ।
मलाई सबभन्दा ‘मै’ मन पर्छ, मै प्यारो छ र मै सुन्दर लाग्छ । यसैले मलाई खूब प्यारो लाग्ने र सुन्दर देखिने ‘म’ यथार्थ मेरो आफ्नो मुख र रूप खूब हेरिरहेर धेरै काल बाँचिरहने इच्छा छ । धेरै जना साथीहरूले मसित धेरैचोटि सोधिसकेका छन्- ‘तिमीलाई सबभन्दा मन पर्ने के हो ? मैले सधैँ सबैलाई खालि यही जवाफ दिने गरिरहेको छु- ‘मलाई सबभन्दा ‘मै’ मनपर्छ, मै प्यारो छ र मै सुन्दर लाग्छ ‘ मलाई भारी गजब लाग्छ, मेरा यी जवाफ सुनेर धेरै जसो मानिस मलाई स्वार्थी र मुर्ख भन्दछन् । जल्ले जे भनू्न् मलाई के पर्वाह छ ? खाँचो छ र आफ्नो रुचिलाई बेचेर, दबाएर दुनियाँको खुशका निम्ति मरिरहूँ ?
हामीलाई कवितामा के चाहिन्छ ?
महकवि देवकोटाका निबन्ध
कवि खालि केमेरा होइन, त कविता फोटो। यद्यपि हामी फोटोलाई कला भन्ने मान्छे पाउँछौँ । चित्रण यान्त्रिक नभए आजसम्म यथार्थवादी कविता संसारले सहेकै छ । मजा लाग्ने उदाहरण पनि पाइन्छन्। तर जहाँ यथार्थवादी कविताले रुलाउँछ, त्यहाँ बाहृय प्रकृतिको फुस्रो चित्रण छोडेर आभ्यन्तरिक हृदयानुभूतितिर डुबेको देखिन्छ । हृदयको रङ राम्ररी नदेखिने कवितालाई हामी ठूलो दर्जा दिन सक्तैनौँ । शब्दले फूल उतार्नु-रङ र रुप साथमा, केही कला हो।
घाइते अचेल जिन्दगानी भएको छ
रगत खोलाको पानी भएको छ।
एक जादुगरको जादुगरीको प्रशंसा निकै फैलियो । उनी गाउँ-घरमा मात्र सिमित नरहेर अब शहर बजारमा पनि चर्चित हुन थाले । टेलिभिजनको पर्दा होस वा रेडियो या अखवारमा उनको बारेमा निकै महत्व दिएर समाचार आउन थाल्यो ।
यो कुरा त्यस राज्यका राजाले थाहा पाए । जादुगरलाई आफ्नै दरवारमा बोलाएर उनको कला हेर्ने रुची जाग्यो । बोलेर मानिसहरुलाई लट्ठ पार्न सक्ने वाक्कला र वाक् चातुर्यता देखेर राजा छक्क परे । अझ एउटा जादुको छडीले आश्चर्यजनक काम गर्न सक्ने उनको कला प्रति राजा नतमस्तक भए ।
– केही दिनदेखि खानामा अरुची भएकोमा आजदेखि प्रधानमन्त्रीले राम्ररी खाना खानु भयो ।
– शिक्षा मन्त्रीबाट राजधानीमा भब्य समारोहका बीच एक फिल्मि पत्रिकाको बिमोचन गर्नु भयो ।
– धेरै दिनको मुसलधारे वर्षाबाट तराईमा भएको क्षतिको निरिक्षण गरेर गृहमन्त्री राजधानी फिर्ता ।
– राजधानीको एक पाकेटमार प्रहीको फन्दामा ।
– राजधानीको एक होटलमा छापा मार्दा बेश्याबृत्ति कार्यमा संलग्न भएको आशंकामा एक जोडी युवायुवती पक्राउ ।
नजाने छुरी बर्सन्छन् हजारौँ, इश्कबाजीमा
र, जाने फूल बर्सन्छन् अनेकौँ, इश्कबाजीमा।